‘छक्का पञ्जा ३’ को गीत युट्यब ट्रेन्डिङको पहिलो नम्बरमा ! – Everest Dainik – News from Nepal
‘छक्का पञ्जा ३’ को गीत युट्यब ट्रेन्डिङको पहिलो नम्बरमा !
काठमाडौं, साउन १९ । ‘छक्क पञ्जा ३’ को ‘पहिलो नम्बरमा’ बोलको गीत युट्यब ट्रेन्डिङको पनि पहिलो नम्बरमा पुग्न सफल भएको छ । ३ दिनअघि दोस्रो नम्बर रहेको यो गीत शनिबार पहिलो नम्बरमा पुग्न सफल भएको हो ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म गीतलाई २ लाख ६३ हजार भन्दा बढि पटक हेरिसकिएको छ । कविराज गहतराजले कोरियोग्राफी गरेको यो गीतको भिडियोलाई आकर्षक लोकेशनमा खिचिएको छ । लोकलयको यो गीतमा दीपक शर्माको संगीत छ । विन्दु परियार र डेभिड शंकरको स्वर रहेको गीतलाई राजेन्द्र थापाले लेखेका हुन् ।
गीतको भिडियो र अडियो उत्कृष्ट छ । यसले अघिल्ला चलचित्र ‘छक्का पन्जा र छक्का पन्जा २’ को जस्तै चर्चा पाउने कुरामा यसको निर्माणपक्ष ढुक्क छ । दिपाश्री निरौलाले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा दिपा र दीपकको लगानी छ । पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन रहेको चलचित्रले कमेडी कथामा सामाजिक सन्देश बोकेको निर्माता दिपकराज गिरीले जनाएका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो-
ट्याग्स: Chhaka panja 3, छक्का पञ्जा ३